Yakasarudzika mutero pfuma | Ehupfumi Zvemari
Susana Maria Urbano Mateos | | Banca, General hupfumi
Dzimwe nguva, zvinoita sekunge zvakakosha kuti tidzidze nezvenyaya dzehunyanzvi idzo dzinotibata munharaunda, uye kunyangwe zvichiongororwa zvishoma isu tinofanirwa kunzwisisa pfungwa dzadzinosanganisira kana tatarisana ne nyaya yekufarira veruzhinji. Inogona kunge isiri yekunyepedzera musoro wenyaya, asi kana iripo mu mitero yemitero yakadzoserwa kuchinja kamwe kamwe kunogona kukanganisa kugadzikana kwemari, mamiriro ezvinhu anomutsa kufarira kwechokwadi kutizivisa nezvazvo.
Komisheni yeEuropean yoda kutanga kuferefeta mitero yemitero yakadzoserwa, Inozivikanwa nechidimbu chayo muChirungu DTA, yemabhangi muItari, Spain, Portugal neGirisi.
1 Ndezvipi zvinodzoserwa mutero zvinhu?
2 Chii chinonzi DTAs?
3 Mari idzi dzisingabvisirwe mari dzinobva kupi?
4 Kuchave nekukanganisa kumaakaundi account semhedzisiro?
Ndezvipi zvinodzoserwa mutero zvinhu?
Midziyo ndeiya inoitika kana kurasikirwa kuchinyorwa mukati menguva inogona kugadziriswa gare gare, panguva iyo mabhenefiti anogadzirwa, izvo zvinoumba chikwereti chemari. Shanduko dzakamuka nekuda kwekuti pane mutemo we solvency wakapinda mu2014 mairi zvinoda kuti maDTA ebhangi abviswe kubva kune zvavo zviwanikwa, izvi hazvichisiri kuvimbisa kuti kukosha kwavo kunotsigirwa mune chiitiko icho sangano inoenda kuburikidza nematambudziko emari.
Semuchiitiko cheSpain, semuenzaniso, mu2013, mukati memwedzi waNovember, zvakapihwa mvumo yekuti chikamu chemidziyo iyi chinogona kuchengetedza kukosha kwayo kwenguva yakareba. Pfungwa huru yanga isiri zvekuti a chakagadzirwa mukana mune zvehupfumi chikamu asi kuti ndikwanise kuishongedza nemabatiro emitero ayo mabhanga nemamwe makambani ainakidzwa mune dzimwe nyika dzeEuropean continent. Mitero yemitero yeSpain yakanyanya kuomarara kupfuura iya yemamwe nyika dzeEurope pane fungidziro panguva yekushandisa aya makadhi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kusiyana nedzimwe nyika, hazvibvumidzwe kudzorera mitero inobhadharwa mumakore ari pamusoro mu chiitiko icho kurasikirwa kuchiziviswa mukambani.
Zvakaoma kunzwisisa zvinangwa zvechokwadi kana kuti chii chiri kurudziro yekuita ongororo, saka vatauriri vakabvuma kuti izvozvi ingori nyaya ye tsamba dzehutungamiriri kune zviremera zvenyika dzakabatanidzwa, zvakare vachiziva kuti iyi mibvunzo inoitwa kune mamwe maMEPs.
Iyo nyaya inowanzo kuve inoshamisa mamiriro kubva kune echimiro kana kuenderana pfungwa kwemaonero. Asi nei uchigadzira kusava nechokwadi kwakanyanya pamusoro penyaya yakaongororwa ikatenderwa zvakanyanya neiyo European Commissionku asi mukondinendi yose yeEurope. Izvo zvakatove zvakataurwa mumishumo yakakosha yekuti ese ari maviri masisitimu akatora matanho ataurwa pamusoro apa emitemo maererano nemitero yemari yakadzoserwa kutsigira kugadziriswa kwehupfumi hwedunhu iri. Izvo zvakakonzerwawo kuita ongororo yakazara nezve mhando yemidziyo iri pane chikamu cheECB.
Chii chinonzi DTAs?
Masangano emari Vane mari dzinogona kudzikisira mabhenefiti avo asi, nekutenda kumutemo, kusvika nhasi, ivo havana kukwanisa kubvisa pamutero wenzanga, zvinoreva kuti vanobhadhara mitero yakawanda kupfuura yavanofanira kubhadharwa. Neichi chikonzero uye mushure mekuita kuenzanisa nedzimwe nyika dzemutemo weEuropean mune izvo zvinobvumidzwa kubhadhara.
Naizvozvo, hupfumi pamwe nehupfumi hwenyika vakacherekedza kodzero yekuchengetera izvo zvinoshandiswa kuti zvishandiswe mune ramangwana nechinangwa chekudzikisa mitero yavanofanira kubhadhara kune mabhenefiti anozokonzereswa mumakore anotevera. Nechikonzero icho icho chinozivikanwa sekudzoserwa.
Mari idzi dzisingabvisirwe mari dzinobva kupi?
Pane zvinyorwa zvitatu kunobva mari iyi. Yokutanga inobva zvigadzirwa zvine mabhanga Zvekuita kuti ukwanise kuvhara njodzi yekurasikirwa nezvinhu zvako mune ramangwana, kunyanya kana iyo kiredhiti inosimudzira iyo real estate yakatorwa kubva kuGuindos zvirevo zve2012. Yakati capital capital inobviswa kubva kubhenefiti, asi sezvazviri kwete kurasikirwa chaiko, mari inoenderera ichichengetwa mubato uye hwaro hwehupfumi hwakaverengerwa mutero weSangano hauna kuderedzwa, saka mutero wefaindi unoburitswa wakadzoserwa.
Sosi yechipiri ndiyo inosanganisira mipiro inoitwa nemabhangi kumarongero epenjeni ekuvhara vashandi vavo, inova mari inotorwa semubhadharo uye inoderedza bhenefiti, asi sezvo ichichengetwa nenzira imwecheteyo, haibvisirwe kana.
Uye pakupedzisira, iyo yechitatu sosi iri mu kurasikirwa kubva makore apfuura kuti, maererano nemutemo uripo parizvino mutero wekambani, kana kambani ikaratidza kurasikirwa, inogona kuvashandisa kudzikisa mitero yaichazobhadhara mune ramangwana, kana ichinge yatariswa semubhadharo zvakare.
Masangano muSpain akachema-chema nezvekushaya mutemo wakakodzera pa mitero yemitero. Sezvatakataura mundima dzapfuura, zvirevo zveGuindos ndezve izvo zvinomanikidza masangano ese ezvehupfumi muSpain kuti ave nechipo chezvinhu zvaifungidzirwa kuti zvine matambudziko mu2012. Mari yakakosha yakakonzeresa kurasikirwa kwakawanda mubato, kune chii ramangwana rakanyanya guta guru raive rakagadzirirwa zvirongwa zvepenjeni, iri dambudziko zvakare, kunyanya kumabhangi eSpain.
Izvi zvinodzikira kune izvo chokwadi kuti chikamu chine huwandu hwe50 bhiriyoni euros. kana zvikatarisirwa kuti kubvisa kuenzana kubva muchiyero ichi zvinoreva kuti masangano eSpain anoda kuwedzerwa capital mune zvese.
Neichi chikonzero, Mitemo yeEuropean Basel III, Vakapihwa nguva yemakore gumi kuti vabvise zvishoma nezvishoma, uye nezviitiko izvi zvinoderera zvakanyanya, asi misika ichazoda kuti masangano asimbise zvinodiwa ne solvency nezvose zvavanobvisirwa sekunge makore gumi atopfuura. , avo vasinga zviite vacharangwawo.
Hurumende yakabvumidza chirevo cheumambo chemutemo mune izvo zvinotsanangurwa kuti bhangi rinogona kuramba richiverenga se capital iyo DTA. Nenzira iyi, kubva panguva iyoyo mitero yemitero inogona kudzoreredzwa chero nguva uye hapazove nemuganhu wenguva yekuti vazivikanwe saizvozvi, zvekuti mabhenefiti haafanoonekwa sekudonha kuri kufungidzirwa nenzira imwecheteyo.
Kana sangano rava nekurasikirwa, mune ramangwana, nyika ichave iyo ichafanirwa kutsiva iyo nekuisa chikamu chemari inosara kuti ibhadharwe kuti ikwanise kuipinza uye kana panga paita bankirapuse, inozopa zvese kune gadzirisa mamiriro acho.
Nyika dzeEurope vane mitemo yakasiyana yemitero munzvimbo dzinogona neimwe nzira kukuvadza huwandu hwesero yemitero, semuenzaniso, kune nyika dzakabvuma kuti mabhesheni emitero asina kukodzera anobviswa nezvakanaka zvemitero kubva kumakore apfuura, nekuda kwechikonzero ichocho hadzina kugadzirwa mitero yemitero ichadzorerwa mune ramangwana.
Kune zvekare nyika dzinogona kuve nerupo kukunda Spain maererano nekushandisa kwavo kwemari nemari yekurasikirwa nechikwereti.
Kazhinji, mabhanga haasi kuwirirana neyakajairwa iyi, izvi imhaka yekuti zvikwata zvakasimudzwa hazvigutsikane nemutsika mutsva pazvikwereti zvemutero, izvi zvinodaro nekuti zvinofungidzirwa kuti zvinogona kuvakuvadza nenzira dzakasiyana. Izvi zvinodaro nekuti mugwaro rakapihwa mvumo nehurumende pachayo, kunyangwe hazvo kwaive kutaurirana nebazi kwevhiki, hapana chinhu chakatariswa, izvo zvinoreva kuti kufambiswa kwemidziyo hakuna kuitwa zvakaringana.
Ndosaka zvinhu zvitatu zvisati zvagadzira iyo mitero yemitero yakadzoserwa pamwe nekuchinjiswa kweayo chepfu real estate pfuma kuSareb. Tsananguro yakapihwa ndeyekuti ivo vaifanirwa kuita gadziriro yekuvhara kurasikirwa kwavo nekuda kweizvi zvikwereti zvinhu, ivhu uye zvivakwa uye ivo vakaita zvimwechetezvo muna2012, umo kuchinjirwa kuri kwezvinhu zviviri, ndosaka vasina kudzosera mutero midziyo zvakagadzirwa.
Kuchave nekukanganisa kumaakaundi account semhedzisiro?
Kana paine shanduko mu nhoroondo dzeveruzhinji, asi izvi zvichave zvechinguva uye zvidiki kwazvo. Izvi zvinodaro nekuti hapana nyaya ndeyekuti mari yeruzhinji inotora kurasikirwa kwezvinhu panguva iyo mutemo wakatanga kushanda, sezvatatsanangura pamusoro, saka, zvinonzwisisika kufunga kuti mhedzisiro yemitero ichave yechokwadi, asi nenzira yakadzikiswa, saka kukanganisa kwacho kunenge kuri kushoma pane zvingatarisirwa nevakawanda. Izvo zvakakosha kuti ruzivo rwenyaya iyi rwunogara rwuchichengetwa mvura kuti uzive nezve mamiriro emari enyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Mitero yakasarudzika
Juan Jerez akadaro
Tarisa, ndakaedza kuverenga kusvika kumagumo, kuti ndione kana ndichigona kuwana chimwe chinhu chakajeka, asi zvave zvisingaite kwandiri. Iye nyanzvi yekunyora. Iko hakuna kwekubata.
Pindura kuna juan jerez
Chicharros iyo yakabuda muna 2017